‘नेपथ्य लाइभ’सँगैै नारायणी किनारमा झुमे युवा – Etajakhabar
बुधबार, माघ ०९, २०७५ | Wednesday, Jan 23, 2019
रत्ननगर, चितवन, २ माघ- साँझको ६ बज्न ४ मिनेट बाँकी थियो । चितवन नारायणी नदीमा सूर्यको गोधूली किरणले छुँदै थियो । नेपथ्य हेर्न दर्शक किनारतिर सोहोरिंदै थिए । किनार छेउको स्टेजमा प्रोजेक्टरले समयको काउन्टडाउन गर्दै थियो ।
आइपुगेका दर्शकले समय कुर्न सकेनन् । चिसो मौसममा नारायणी किनार तात्न थाल्यो । दर्शकको हुटिङ बढ्न थाल्यो । अघिपछि रातमा सन्नाटा छाउने किनार सोमबारको साँझ रमणीय बन्दै थियो । जब काउन्टडाउन शुन्यमा झ¥यो तब ‘स कर्णाली’ गुञ्जन शुरु भयो । दर्शक उफ्री उफ्री मच्चिन थाले ।
तिलचामल हुँदै गरेको लामो कपाल पछाडि बाँटेर हल्का फूलेको जुँगा मुसार्दै निस्किनुभयो अमृत गुरुङ । उहाँलाई देख्नासाथ दर्शक उत्साहित भए । स्टेज तात्न थाल्यो । ‘भेडाको ऊन जस्तो’ गीत स्टेजमा गाउन थाल्नुभयो । गुरुङको स्वरसँग दर्शकको स्वर मिसियो । ‘छेक्यो छेक्यो देउराली डाँडा’ पनि पस्किए । त्यतिबेलासम्म भीडले नारायणी किनार ढाकिसकेको थियो ।
दाताज इभेन्ट एण्ड म्यानेजमेन्टले चितवनको अत्याधुनिक प्रविधिसहितको संगीत प्रणालीमा नेपथ्य व्याण्डको ‘नेपथ्य लाइभ २०१८’ आयोजना गरेको थियो ।
‘चार वर्षदेखि सांगीतिक कार्यक्रम गर्दै आएको थिएँ, यति ठूलो भीडका बीच नेपालकै उत्कृष्ट व्याण्ड ल्याएर दर्शक नचाउन पाएकामा खुशी छु,’ इभेन्ट प्रमुख दाताराम घिमिरेले भन्नुभयो ।
‘सात गण्डकीको संगम स्थल नारायणी नदीको किनार, चितवनको यो माहोल, माघे संक्रान्तिको दिनमा तपाईंहरुमाझ आउँदा हामी सबै हर्षले गद्गद् भएका छौं, हो…ई ।’ त्यसमा दर्शकले हो मा हो मिलाए । गुरुङले दुई हात जोडेर नमन गर्दै शिर झुकाउनुभयो ।
पmरक प्रस्तुति र मौलिक स्वाद पस्कने व्याण्डले २५औं वर्षगाँठ मनाइरहेको छ । त्यही अवसरमा २८ वर्ष अघिको पहिलो गीत, ‘आँगनै भरी’ प्रस्तुत भयो । प्रस्तुतिसँगै सम्बन्धित दृश्य पनि साथसाथै देखाउनु नेपथ्यको आफ्नो पहिचान हो । अनि सन्देशमूलक शब्द चयन गुरुङको आफ्नै मौलिकता हो ।
‘आज मलाई यस्तो लागेको छ कि म फूलै फूलको बीचमा बसेर गीत गाइरहेको छु, भाइ बहिनीहरुबीच गीत गाउँदा मलाई मेरो बैंशका दिनहरु याद आइरहेको छ,’ गुरुङले अलिकति वैंशका कुरा उधिन्दै भन्नुभयो – ‘मेरो अनुरोध छ है, कुनै पनि बच्चालाई घरभित्र लुकाएर राखिएको छ भने ती बच्चालाई स्कुलमा जान सबैले सहयोग गर्नु हो….ई ।’ दर्शकले एकै स्वरमा फेरि होईमा होई मिलाए ।
गायकमा शुरुदेखि अन्त्यसम्म युवा जोश हटेन । शुरुआती चरणमा नयाँ गीत ‘शिरफूल शिरैमा,’ गाउनुभयो । खान्न म त लाम पाते सुरती, उडायो रेलैले, जोमसोमै बजार, जोगले हुन्छ भेट क्रमैसँग गाउनुभयो । यति गीत गाउँदा करिव एक घण्टा बित्यो ।
नारायणी किनार तात्यो । युवा लुगा खोलेरै गीतमा झुम्न थाले । जोमसोमै बजारपछि माहोल थप तात्यो । नेपथ्य लाइभ हेर्दै व्यवस्थापकमध्येका एक सूर्यभक्त अधिकारीले नेपथ्य आफैंमा गीतसंगीतको ब्राण्ड भएको भन्दै यो चितवनको उत्कृष्ट कार्यक्रम बन्न सफल भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
गीत र संगीतको तालमा गायक गुरुङले कम्मर मर्काउँदै हाउभाउमा दर्शकलाई रोमाञ्चक बनाउन चुक्नुभएन । उहाँको प्रस्तुतिमा नेपालीपन र भाव झल्किन्थ्यो । एक हजार र पाँच सय रुपैयाँको टिकट काटेका दर्शक नारायणी किनारमा हजारौं थिए । चितवन क्षेत्र नम्बर २ को प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेल र प्रदेशसभा सदस्य विजय सुवेदीको परिवारसहित नेपथ्यसँग रमाउनुभयो । चितवनका प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापा र उहाँको परिवार नेपथ्यको गीतमा झुम्दै नाच्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य सुवेदीले नेपालीपनको उत्कृष्ट प्रस्तुति भन्दै नेपथ्यको प्रशंसा गर्नुभयो ।
बीच बीचमा सन्देश बाँड्ने गुरुङले डा गोविन्द केसीको आन्दोलनमा साथ दिन पनि अपिल गर्नुभयो । ‘हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई, हामी मिलेर बसौं हो…ई ।’ यसरी उहाँले राष्ट्रियताको सन्देश बाँड्नुभयो । लोकसंस्कृति र भाषा बचाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
देश बनाउन हामी आफैं लाग्नुपर्छ भन्दै गुरुङले ‘गाउँगाउँबाट उठ, बस्तीबस्तीबाट उठ’ गीत प्रस्तुत गर्दा कम्मर नमर्काउने दर्शक शायदै थिए ।
उहाँले तिमी पनि नेपाली म पनि नेपाली, यो जिन्दगानी, हिमाल चुचुरे, रेशम, तालको पानी गाएर दर्शकलाई २ घण्टा मुग्ध पार्नुभयो । उहाँले ‘रातो र चन्द्र सूर्य’ गीतबाट दर्शकसामु एकताको सन्देश छाड्दै प्रस्तुतिको बीट मार्नुभयो ।
उहाँलाई ड्रम्समा ध्रुव लामा, देश गितारमा सुविन शाक्य, मादलमा शान्ति रायमाझी, पियानोमा सुरज थापा र गितारमा निरज गुरुङले साथ दिनुभएको थियो । शान्ति यात्राका क्रममा चितवनको रत्ननगरमा नेपथ्य व्याण्डले ४ वर्ष अघि प्रस्तुति दिएको थियो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ०२, २०७४ समय: १५:२०:३५
मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा फुलन्देकी आमा बनेर सबैलाई हँसाउने उमेश राईको अभिनय रहेको म्यूजिक भिडियो हेर्नुहोस्, आमा नहुँदाको पिडालाई उनले यसरी पोखेका छन् (भिडियो)
गायक शेर बहादुर डाँगीको आवाजमा ‘मलाई रोमान्स भो ’ बजारमा (भिडियो सहित)
साया भण्डारीलाई चर्चित मोडल विमल अधिकारीले छोडेपछि ………….. (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
दुरुस्तै अभिनेता टाइगर श्राफ जस्तै देखिने यी असमका हिरो ,उनलाइ देख्ने जोकोहि झुक्किन्छन् ,हेर्नुहोस् चकित पार्ने तस्बिरहरु
वर्षा र विपिनले के गर्दैछन् गोपीमा ? पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो भने (भिडियो)
कपिल शर्माको शो भन्दा तगडा कमेडी शो मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा दीपक बज्राचार्यको यस्तो रमाइलो , फुलन्देकी आमाको प्रश्नमा रोक्न सकेनन् हाँसो (हेर्नुहोस् भिडियो)
फिल्म ‘किक–२’मा ज्याकलीनलाई रिप्लेस गर्दै सलमानसँग रोमान्स गर्ने भइन् दिशा पटानीले (भिडियो)
हेर्नुहोस् यस्ता छन् चर्चित नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मीका आगै लगाउने १५ हट तस्वीरहरु
बिहेपछि रविलाई गालीको ओइरो, अन्तत : रविले मुख खोले बिहेको बारे, गालि गर्नेलाई यस्तो सम्म भने….(हेर्नुहोस् भिडियो)
शिक्षाको व्यापार सदाका निम्ति बन्द हुन्छ : मन्त्री बाँस्कोटा
दुर्घटनामा परी गम्भिर घाइते भएका मनकुमारले गहभरी आँशु पार्दै मागे सहयोग (भिडियो)
बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ र खानेपानीका लागि नेपालमा ठूला जलाशययुक्त परियोजना बनाइदै